Uyini zamazwe amabili wesimethri flatworms: izici kwesakhiwo izici jikelele
Flatworms athathwa ngokuthi worm iyingozi, balimaze esobala yokubona izilwane eziningi futhi abantu. Nokho, la magciwane kube nezici eziningi eziphambili isakhiwo, uma iqhathaniswa nayo amayunithi odlule ehlelekile futhi hlala nasembonini isimiso sezwe organic. Kulesi sihloko uzofunda ukuthi zamazwe amabili wesimethri flatworms kungani ezinye zazo akudingeki lomgudu wokugaya ukudla bese kungani zinendima ebalulekile eziwukudla.
Isici nobuntu flatworms kungumzimba isimo sabo. It has uhlobo ishidi noma ama-ribbon. Kule ndaba, lezi zilwane ungenalo ingaphakathi, kanye izikhala phakathi izidumbu zigcwele ngohlobo olukhethekile ezicutshini - parenchyma. Igama elithi "wesimethri zamazwe amabili" flatworms ihlangabezana okokuqala, komunye coelenterates libhekene injalo - ngemisebe.
Progressive futhi isici ukuba khona kwakhiwa isitho izinhlelo. Ngokwesibonelo, zemisipha siqukethe iqoqo ebusweni epithelium futhi esiyimbangela imisipha ungqimba. Uhlelo kokudla avaliwe. uhlelo Excretory emelelwa tubules awo adedelwa nibonakala pores. Ngenxa yokwehluleka kwemizwa uhlelo flatworms babe izinzwa: emehlweni, touch, ukulinganisela bezibona chemical. Iningi lezi zilwane hermaphrodites. Lokhu kusho ukuthi imizimba yabo akhiwa kokubili ama-germ cells owesilisa nowesifazane. Kodwa flatworms zokuphefumula abangenawo. Zenza negesi lokushintshisana lonke ebusweni nomzimba. Ngaphakathi uhlobo amakilasi angawodwa: ciliary, izikelemu kanye flukes.
Uyini zamazwe amabili wesimethri flatworms
Ngo kwemvelo lesi sici okokuqala buvela izimpethu yalolu hlobo. Futhi ngokuvamile kusho umugca lohlukanisa emkhatsini? Leli lungiselelo zezitho ngazinye isihlobo umzimba ukuze eksisi noma isikhungo. Izilwane lokuqala ezinamangqamuzana amaningi, okuhlanganisa izipanji azinazo wesimethri. Enezela substrate, bakwazi ukwakha noma iyiphi ukuma.
Khumbula ukuthi ifana jellyfish. Phakathi umzimba wakhe, ungafaka i iphuzu ngengqondo lapho zonke izinhlangothi ukuze ubambe umugqa. Lona ngemisebe, noma wesimethri osabalalayo. Kuyinto isici izilwane ezihlala ezijulile ezilwandle nakuzo izilwandle.
Uyini zamazwe amabili wesimethri flatworms? Phawula lapha esithombeni. Kanye kwayo yonke indikimba yezikhonzi worm, ungakwazi Udweba umugqa ngengqondo eyayibonakala bahlukanise kwawo izingxenye ezimbili alinganayo. Lena wesimethri amabili emaceleni noma zamazwe amabili.
Izici wesimethri zamazwe amabili
Siyini isizathu ukubukeka uhlobo olusha wesimethri? Okokuqala - ne indlela yokuphila ishintsha eziphilayo nokuba yinkimbinkimbi isakhiwo sabo. wesimethri Bilateral kuyisici sobuntu izilwane ukukhuthalele ezihambayo emkhathini. Lokhu kubenza bakwazi ukuhambisa umugqa bese uvula. Ezintweni eziningi eziphilayo ezifana ngokucacile ivelele phambi umzimba umnyango ezikhethekile. It ahlelwe nokubopha receptor futhi bamba inyamazane. Flatworms baye ezimise isitho izinhlelo. Lena enye izici okuqhubekayo isakhiwo sabo. Flatworms izitho, kanye nezinye izilwane nge wesimethri bemave lamabili, zitholakala nhlangothi zombili ulayini engokomfanekiso.
Zonke izimpethu kuleli kilasi amahhala eziphilayo, ogama Ubukhulu musa idlule 6 cm. Igama ciliated izimpethu wakhe ubophekile ciliary epithelium esehlanganise umzimba wabo. Zihlala amanzi ahlanzekile, amanzi usawoti, naphansi ehlathini. Yini wesimethri flatworms zamazwe amabili, kungcono kakhulu obonwa sibonelo sabo, njengoba komzimba wabo has ishidi ngokwanele ububanzi ngendlela isicaba dorsoventrally. Turbellarians - eziyingozi. Bona ukukhasa wonke isisulu, ephethe wakhe. Ngaphezu kwalokho, kusukela umlomo avele lezi ezincane. Ngalo, worm sucks okuqukethwe isisulu. La magciwane adla izilwane ezincane: ezinamagobolondo, Hydro, izibungu izinambuzane. Abamele alesi sigaba yobisi angenasawoti planarians.
Kodwa flukes izimuncagazi ezivamile. Ziyakwazi kwezinhlobo ezivamile - futhi ikati isibindi. Leli gama bathi ebona aphethe sokugcina. umzimba wabo kungaba-8 cm. Nge amaswidi besisu futhi ngomlomo anamekwe izibilini umninikhaya sondle ke ezicutshini. umjikelezo yabo ukuthuthukiswa kuhilela izigaba phakathi lapho ukushintsha Sebawoti eziningana. Ngakho, i-yisikhohliso ikati eba emzimbeni wonke angenasawoti izimbaza nenhlanzi. Kuphela ngemva kwalokhu amafomu impethu abantu abavuthiwe, okuyinto parasitizes esibindini izinja, amakati noma nezimpisi.
Abamele omkhulu kakhulu lolu hlobo yezilwane izikelemu. umzimba wabo yakhiwa inhloko encane, okuyizinto izinhlaka okunamathiselwe, entanyeni amalunga omzimba. Lesi sakamuva singabangela ukufinyelela amayunithi ayizinkulungwane eziningana noma amashumi amamitha. Sezinkomo ingulube tapeworm, tapeworm ububanzi, echinococcus yisinanakazana e mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi emathunjini amancane kwezilwane eziningi abantu. Ngakho-ke, bona bahlangana namaqanda ezikelemu abanalo wokugaya ukudla. Bona ncela kakade kugaywe udaba eziphilayo.
Ngakho, abameleli hlobo flat benezingane eziningi izici ezithuthukile isakhiwo. Lezi zihlanganisa ukuvela umzimba wesimethri bemave lamabili, okuyinto lihlotshaniswa kumiswa lwalezi nhlelo isitho.
Land Rover "Freelander 2" - SUV compact
Indlela yokuthuthukisa nesilulumagama womuntu
Hypomania - a ... hypomania: Izimpawu, Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Anemibala izintambo. Sokuqonda ikhebula wokugubha futhi ngocingo
Yini ukubona e Florence: izinto isithombe
Borsch nge donuts: iresiphi
Kanjani fuse ugwayi ilula futhi lokho kuyinto thina?
I Amylase enzyme. Norm ezingeni umsebenzi wayo